Asikho Isipho Sosuku Lokuzalwa Olungcono! Abafundi bokuphakela abangama-500! | Martech Zone
Asikho Isethulo Sosuku Lokuzalwa Olungcono! Abafundi bokuphakela abangama-500!
ULwesithathu, April 18, 2007 NgeSonto, ngoFebhuwari 5, 2017 Douglas Karr
Okuqukethwe, i-Passion, i-Momentum… yile izakhi ezintathu ukuthi ngikhuluma namakhasimende ami mayelana nokufika kokubhuloga. Abanye abantu bacabanga ukuthi ukubhloga kungumsebenzi we-narcissistic - ikakhulukazi uma ukhuluma ngempumelelo yakho yokubhuloga. Impikiswano, yiqiniso, kungani umuntu angakulalela uma ukhona hhayi uphumelele? Ngithumela inani lokuphakelwa futhi ngigcina isikhundla sami seTechnorati nolunye ulwazi lusesikhathini ukuze ngikwazi ukunikeza ubufakazi bempumelelo yezihloko zebhulogi lami.
Kusasa usuku lwami lokuzalwa. Ngivame ukuthula usuku lwami lokuzalwa ngoba usuku olubi emlandweni. Ezikhathini zakamuva, sekube yisonto lenhlekelele (manje engeza iVirginia Tech ohlwini olubi lwemicimbi).
Kodwa-ke, angikwazi ukuzibamba kodwa ngibeke le grafu phezulu futhi ngiyabonga bantu ngesipho esihle kakhulu sosuku lokuzalwa umfana angasicela! (Ngaphandle kwezingane zami kanye ne I-AppleTV lowo Mthethosivivinywa futhi Carla ungitholile.)
Ngishaye ngaphezu kwabafundi abangama-500 ngokudla kwami ​​namuhla!
Ngibonga wonke umuntu ngokunamathela! Emasontweni ambalwa edlule Ngithumele okuthunyelwe kwami ​​okungu-500. Ngiyaqhubeka nokuzama ukwakha okuhle sokuqukethwe, mkami uthando isenamandla njengakuqala, futhi umfutho ye-blog yami iyaqhubeka! Ngifunde kwenye indawo ukuthi yi-1% kuphela yezivakashi ezizophawula empeleni. Uma unamahloni futhi ungazizwa uthanda, yazi nje ukuthi ngiyazisa kakhulu inkampani yakho!
Inothi elibalulekile: Ngiyabonga ngokukhethekile UJohn Chow ongikhuthaze ukuthi ngenze izinguquko ezithile ukuze ngihehe abafundi abaningi kokuphakelayo kwami. Uzobona umbhalo omncane ongaphansi kwendatshana ukumema ukuthi ujoyine okuphakelayo kwami. Futhi, nginikela ngesikhangiso sonyaka wamahhala wokubamba ngaphakathi kokuphakelayo kwami. Ngezeluleko zikaJohn, ngicabanga ukuthi ngisheshise ukutholwa kwami ​​kwe-RSS kancane. Ngiyabonga John!
Tags: UJohn chowUbufundiRSStechnoratiukunqoba
Ngisho nabafana abakhulu bayakhohlwa ukusetshenziswa!
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-8: i-16 PM
Siyakuhalalisela nge-500th kanye nosuku lokuqala oluhle lokuzalwa!
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-8: i-43 PM
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-8: i-35 PM
Ukufanele kahle, qhubeka nokuqukethwe okuhle futhi uzoba ku-1000 ngokushesha!
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-10: i-52 PM
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-10: i-56 PM
siyakuhalalisela nosuku lokuzalwa oluhle!
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-11: i-41 PM
Siyakuhalalisela uDoug, ufanelwe kahle!
james kingsted - Isizinda Sokwazisa
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-1: 23 AM
Ngijabule ngani, siyanihalalisela nosuku oluhle lokuzalwa!
Ngisanda kuqala ukufunda ibhulogi yakho futhi ngicabanga ukuthi kuyinsiza enhle. Ngikholisile ukuthi unensiza ebalulekile. 500th kuyinto enhle. Qhubeka nomsebenzi omuhle engikulangazelele ukufunda okuthunyelwe kwakho okuzayo.
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-7: 59 AM
Siyabonga ngamazwi anomusa uJames! Impendulo enjengale yamukelekile ngaso sonke isikhathi. 🙂
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-2: 58 AM
Siyakuhalalisela, nakho konke okuhle ngosuku lwakho lokuzalwa lwama-29 😉
… Nekhekhe elikhulu lokuzalwa, impilo, futhi kungekudala-phezulu-2500 eTechnorati.
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-7: 56 AM
Ngiyabonga Martin. Uphume eminyakeni eyi-10, noma kunjalo. Enye indlela ngokuguga, enye ngokuvuthwa. Ngeke ngisho ukuthi yikuphi, noma kunjalo! 🙂
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-4: 33 AM
Siyakuhalalisela impela uDoug ..
Abafundi bokuphakela abayi-500 abuyona into embi .. Kubonisa nje umzamo owuthathile wokubasekela ..
Umsebenzi omuhle futhi uqhubeke
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-7: 38 AM
Halala! Lokho kufezwa okukhulu! I-BTW, lelo ijika elihle lokukhula elibukeka kahle.
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-7: 58 AM
Ngiyabonga Thor. Ngicabanga ukuthi ijika lokukhula lingubufakazi bokuqina ngaphezu kwanoma yini enye. Ngingathanda impela ukusebenzisa okunye ukuhlaziywa kwezibalo kwinani lezikhala ngokuhamba kwesikhathi ngemiphumela yenjini yokusesha nokubekwa. Nginesiqiniseko sokuthi kukhona ukuhlangana okuhle lapho. Ngelinye ilanga ngizokwenza izibalo!
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-9: 03 AM
Sikufisela usuku lokuzalwa oluhle, futhi siyakuhalalisela ngo- # 500! Ngiyabonga ngokwenzile.
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-11: 16 AM
UDoug, halala. Kufanele ngokuphelele. Ngiyalithanda isayithi lakho nokuqukethwe kwalo. Qhubeka nomsebenzi omkhulu. Futhi, Usuku Olumnandi Lokuzalwa.
Ngo-Apr 19, i-2007 ku-12: i-05 PM
Sawubona Doug - Indlela ozohamba ngayo! Ngokuya ngokuqukethwe okuhle okunikezayo, ngibheja umgwaqo oya ku-1000 uzoshesha.